Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A September 2010 (7)
Q and A September 2010 (7)
1. ကျွန်တော့ လိင်အဂါင်္မှာ ရေယုန် ထွက်ဖူးပါတယ်
2. လူက အရမ်း မဝပေမယ့် ဗိုက်က ပူနေတယ်
3. ကွန်ဒုံးကို အသုံးပြုပီးရင်
4. ပြည့်တန်ဆာနဲ့ ဆက်ဆံခဲ့ပြီး
5. အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ အရွယ်ရောက်သည့် အချိန်မှစပြီး
Sep 23, 2010 at 10:48 PM
Q: ကျွန်တော့ လိင်အဂါင်္မှာ ရေယုန် ထွက်ဖူးပါတယ်။ အခု Online ထဲမှာ ဖတ်ကြည့်နေရင်း နဲ့တွေ့တာတခုက လိင်အဂါင်္မှာ ရေယုန် ထွက်ဖူးရင် ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ ရှိနိုင်တယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။ နောက်ပြီး ပေါင်ခြံမှာလဲ ဆီးကြွတ်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ ရောင်နေတာတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ ကောင်းကောင်းကိုင်လို့တော့ ရပါတယ်။ အဲ့ဒါလေး ရှင်းပြပေးပါ။
A: ရေယုံက ဆစ်ဖလစ်နဲ့ မဆိုင်ပါ။ ဗိုင်းရပ်စ် တမျိုးကဖြစ်တာပါ။ များသောအားဖြင့် လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ တခု ဖြစ်တယ်။ ပေါင်ခြံက ဖြစ်နေတာကို ရေးပြတာ မရှင်းသေးပါ။ ကြွက်နို့လား၊ အကြိတ်လား၊ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ လိုအပ်မယ် ထင်ရင် ဓါတ်ပုံရိုက် ပို့နိုင်ပါတယ်။ အလင်းရောင် ကောင်းကောင်းမှာ ရိုက်ပါ။
24 Sep 10, 09:08
Q: လူက အရမ်း မဝပေမယ့် ဗိုက်က ပူနေတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းကပါ။ နေ့ခင်း အိပ်လို့လားမသိဘူး။ ကလေး မွေးထားတာ ၁ နှစ်လောက်ပဲ ရှိသေးတော့ ဘယ်လို လေ့ကျင့်ခန်းမျိုး လုပ်သင့်ပါလဲ။
A: ကလေးဖွါးပြီးသူတွေ တခြားလုပ်နေကြ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လက်လှမ်းမီရာ၊ စိတ်ပါတာ၊ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တခုခုကိုတော့ မညွှန်းလိုပါ။ ဆေးပညာအရ လုပ်စေချင်တာက Pelvic floor exercise ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းရော၊ အစား အသောက် ဂရုစိုက်တာပါ လုပ်သင့်ပါတယ်။
24 Sep 10, 11:56
Q: ကွန်ဒုံးကို အသုံးပြုပီးရင် tissue နဲ့ကိုင်ပြီး ချွတ်ရတယ်လို့ စာတော်တော်များများမှာ ဖတ်ရပါတယ်။ အဲ့လိုမျိုး မချွတ်မိပဲ သူ့အတိုင်းပဲ ကိုင်ပြီး ဆွဲလှန်ချွတ်မိရင် ဘယ်လိုဖြစ်တက်လဲသိပါရစေ။
A: (ကွန်ဒွန်) ကို ချွတ်ရာမှာ နှစ်ယောက်လုံးက HIV ဘီပိုး၊ စီပိုး မရှိသူ၊ ကလေးခြာချင်လို့သာ သုံးသူတွေက လက်နဲ့ ကိုင်လို့ ရပါတယ်။ ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာ ဖြစ်စေ ကိုင်တဲ့သူလက်မှာ အနာအဆာ မရှိရင်လဲ လက်နဲ့ကိုင်လို့ ရပါတယ်။ သန့်ရှင်းရေး ပုံမှန် ဂရုစိုက်သူများကတော့ တစ်ရှူးနဲ့ ကိုင်ကြတယ်။
Q: ပြည့်တန်ဆာနဲ့ ဆက်ဆံခဲ့ပြီး ဒီတိုင်းပဲ အလွယ်တကူ လက်နဲ့ပဲ အရင်းက လှန်ပြီး ခွာချွတ်ခဲ့ရင်ရော အန္တရယ်ရှိနိုင်ပါသလား သိပါရစေ။ HIV ဟာ ခန္ဒာကိုယ်ထဲကို ဝင်ရောက်ပြီးရင် နှစ်တော်တော် ကြာအောင် ရောဂါပုံစံတွေ မပြဘူးဆိုတာ အများဆုံး ဘယ်လောက် ကြာအောင် မပြပဲ နေတာပါလဲ။ ကျွန်တော် သိသလောက်ကတော့ ရောဂါဝင်ပြီးရင် ၄-၅ နှစ်ဆို AIDS ဖြစ်သွားပြီလို့ သိရပါတယ်။ အဲလို ရောဂါလက္ခဏာ မပြတဲ့သူ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရှိလဲ ဗဟုသုတအနေနဲ့ သိပါရစေ။
A: ခန္ဒာကိုယ်ထဲကို HIV ဝင်ပြီး ဘယ်လောက်ကြာမှ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ပြသလဲဆိုတာ Clinical latency ခေါ်တယ်။ ၂ ပါတ်ကနေ အနှစ် ၂ဝ လို့ဆိုပါတယ်။ အခုထိ တိတိကျကျ ပြောမရသေးပါ။ စအိုကနေ ကွန်ဒွန် မသုံးသူတွေက တခါပြုတိုင်း ၃-၅% ဖြစ်စေဘို့ များလာနေတယ်။ ဗဂျိုင်းနာကနေ ကွန်ဒွန် မသုံးတာ နဲ့ ပါးစပ် သုံးတာတွေထက် မြန်တယ်။ တကြိမ် ဆက်ဆံမှု ရှိပြီးနောက် ၂-၆ ပါတ်နေရင် အများစုက HIV antibody test positive ဖြစ်တယ်။ ၆ လနေရင် လူတိုင်းမှာ positive ဖြစ်တယ်။
Sep 7, 2010 at 5:27 PM
အသက် ၃ဝ နှစ် အိမ်ထောင်သက် ၃ နှစ် ရှိပြီး အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ အရွယ်ရောက်သည့် အချိန်မှစပြီး ယခုအချိန်ထိ ရင်သား နှစ်ဖက်စလုံးမှာ တစ်လုံးထက်မကသော အကြိတ်များ ရှိနေပါတယ်။ ၎င်းအကြိတ် တွေဟာ ကြီးထွားခြင်း နာကျင်ခြင်း မရှိပါ။ ဖျစ်ညှစ်ရင်တော့ နာပါတယ်။ ၎င်းအကြိတ်တွေဟာ ကင်ဆာ မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ သို့သော် -
(၁) တချိန်ချိန်မှာ ကင်ဆာအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသလား။
(၂) ၎င်းအကြိတ်တွေကို ကြေသွားအောင် မရှိတော့အောင် လုပ်လို့ရပါသလား။ လုပ်နည်းလေးကို သိချင်ပါတယ်
ရင်သားအကြိတ်ဆိုတာ တခြားအကြိတ်မှန်သမျှလိုဘဲ ကင်ဆာနဲ့ ကင်ဆာမဟုတ်တာ ၂ မျိုးရှိတယ်။ အသက် ၃ဝ၊ ဖြစ်တာလဲ ကြာပြီဆိုရင် မေးတဲ့သူပြောတာ မှန်မယ်။ ကင်ဆာဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါ။ နှစ်ဖက်လုံးလည်းရှိ၊ တလုံးမကလည်း ဖြစ်နေတာ ရှားတော့ ရှားပါတယ်။ များတာလဲ ကင်ဆာနဲ့ မနီးစပ်ပါ။
ကင်ဆာအဖြစ် ပြောင်းမလား။ သီအိုရီအရ လုံးဝ-လုံးဝ မဖြစ်ဘူးလို့တော့ မပြောနိုင်ပါ။ မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောတာ-ရေးတာ တွေက များတယ်။ ကင်ဆာ မဟုတ်တဲ့အကြိတ်ကို ခွဲထုတ်ရပါတယ်။ ဆေးနဲ့ မရပါ။ မစမ်းစေချင်ပါ။ ခွဲရတာ စိုးရိမ်စရာ ဘယမှမရှိပါ။ ထုံဆေးနဲ့ခွဲတာပါ။ အမာရွတ် ရုပ်မဆိုးအောင်လည်း နေရာအပေါ်မူတည်ပြီး၊ များသေားအားဖြင့် ရနိုင်တယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 8:08 PM